fokontany sy kaominina ao ihany, distrikan’i Manjakandriana. Tamin’ny zoma teo sahabo tamin’ny 4ora sy sasany hariva no nitrangan’ny loza. Heverina ho ny fandehanana mafy hatrany no nahatonga izao patsa iray tsy omby vava izao. Fiaram-panjakana vaovao mbola mitondra ny laharana “WWT” marika «Isuzu» nentina mpamily 38 taona avy ao Andraisoro sy fiara mpitatitra olona marika
« mercedes sprinter » nentina mpanamory 40 taona avy any Imerimandroso Ambatondrazaka izao nifandona izao. Nidina teny an-toerana nitrangan’ny loza ny zandary avy ao amin’ny tobim-janaparitra Ambatolaona nanatanteraka ny fitsirihina sy nandray an-tanana ny famotorana. Tsy nisy ny naratra na ny namoy ny ainy fa ny fahasimbana izay vokatry fifampikasohana mafy no nanjo ireo fiara roa. Araka ny voalazan’ireo mponina any an-toerana, fitrangan’ny loza matetika io toerana nisian’ny loza io noho ny hatsaran’ny lalana izay mahitsy kanefa tatazan’ny fiolahana tampoka.